I-tapeworm iyi-worm. Izimpawu zesifo kanye nokwelapha.
Njengamanje, kunezifo eziningi zesistimu yokugaya ukudla, imbangela yayo enzima ukusungula, esekelwe kuphela esithombeni sekliniki. Ukuhlolwa kweziguli ezinjalo kuhlanganisa ukuhlaziywa okuningi kanye nezifundo zezinsimbi, lapho kungenzeka khona ukuthola i-pathogen. Kukhona iqembu elikhulu lezinkinga ezibangelwa ukuhlasela kwe-helminthic, omunye wabamele yi-tapeworm (tapeworm), okuyinto uhlobo lwezinambuzane ezinamafulethi. Lezi zinhlobo zingadlalisa zombili emzimbeni wezilwane, nakubantu.
I-Solitaire iyimbongolo, ubude bayo buhluka kusuka kumamitha ambalwa ukuya kumamitha angu-8. Amaketanga avame ukuthinta izitho zokugaya izilwane; Ukuhlukanisa phakathi kwezikhumba zezinkukhu kanye nezinkukhu. Uhlobo lokuqala lwezinambuzane, uma lungenwe emzimbeni womuntu, lubangelwa isifo esibizwa ngokuthi i-shadowarhynchosis, uhlobo lwesibili - isithunzi somthunzi. Ukwahlukana phakathi kwe-tapeworms - ubude bayo (ubude bezinkabi ziyizikhathi ezimbili zezingulube) kanye nekhono lokubeka izibungu emathunjini amancane omninimzi. Ngenxa yalesi sici, ama-parasites ahlukaniswe ngamaqembu amabili: "ahlomile" futhi "angahlomile". Izinhlobo ezihlukene ziyi-tapeworms ezithinta umzimba wezingane. Ezinganeni, ubukhulu be-tapeworm buyingcosana yamamentimitha ambalwa ("amancane" we-tapeworm). Izifo ezibangelwa yizifo eziphilayo zivame kakhulu emazweni asathuthuka (Afrika, India, njll).
Ukungena nokuphikelela emzimbeni
Ukudluliswa kwe-solitaire kuyondla - okungukuthi, i-agent e causative ingena emzimbeni womuntu ngokudla, ngokunembile, nenyama yezilwane ezinesifo. Ngemuva kokuba i-tsepen idlula ngendlela yokugaya, ihlala ezindongeni zamathumbu amancane futhi iyanamathela ngosizo lwamashukela akhethekile ekhoneni lesibungu. Ngenxa yokuthi umzimba we-tapeworm uqukethe izingxenye ezihlukene, umthamo ungakwazi ukuhamba ngokuzenzekelayo umzimba. Ngenxa yokwazi ukubeka amaqanda ngobuningi ngesikhathi esifushane, i-pathogen ivame ukungena ezingxenyeni ezihlukahlukene kakhulu zomzimba. Ukuzimela kubantu kungatholakali nje emathunjini amancane kuphela, kodwa nakwezinye izitho zokugaya, ubuchopho, amehlo, njll.
Solitaire kubantu: izimpawu
Zombili izinhlobo zamaketanga zidala izimpawu ezifanayo ekuqhubekeleni kwesifo. Kwezinye izimo, i-shadeiarhoz ne-teniosis ingase ibe yinkimbinkimbi, futhi isiguli asikho ngisho nokusola ukuthi kukhona ama-parasite emzimbeni wakhe. Njengoba umthamo we-tapeworm ukhula, ukubonakaliswa okuphawulekayo kuqala ukuvela:
Izifo ezibuhlungu, okungukuthi, ukubonakala kwesifo sohudo noma ukuqothulwa, ubuhlungu besisu, isicashu, ukuhlanza.
I-Asthenovegetative syndrome - ubuthakathaka obuvamile, ikhanda lokukhanda, ukulahlekelwa ukudla.
Ukubonakala kokuphendula okwenziwe okwehla.
Inkinga yesistimu enobuhlungu: ukucasula, ukungazwakali, ukuphazamiseka kokulala, ukulahlekelwa inkumbulo, ukuhlukunyezwa, njll.
I-Syndrome yokuvimbela emathunjini - kwenzeka uma ubukhulu bomthamo womthamo bukhulu, kuyilapho umthamo uvala isikhumba somathumbu omncane noma esikhulu futhi ukudla akukwazi ukukhishwa ngaphandle. Lapho umgwaqo wokugaya ukugaya ufaka ukuhlinzwa okusheshayo ukususa i-pathogen emzimbeni.
Ukunqunywa kwe-tapeworm emzimbeni womuntu
Ukuthola ukuxilongwa kwamathunzi noma shadyarinhinoz kuyadingeka ukuba uhlole ngokugcwele, okhethwe ngumuntu ohamba nge-parasitologist. Okokuqala, lochwepheshe kufanele afunde izikhalazo zesiguli, kakade kulesi sigaba kungacatshangwa ukuthi isiguli sinomugudu womzimba. Isibungu singaba ngobukhulu obuhlukahlukene, ngakho-ke izimpawu zingahluka. Ngemuva kokuqoqwa kwezikhalazo, isiguli kumele sibuzwe ngokugcwele: yini ehlobanisa nesifo (emva kokuhlala ezindaweni ezingcolile, ukudla imikhiqizo yenyama). Isinyathelo esilandelayo ukukhomba i-pathogen emthonjeni. Ukuze uthole isitatimende esinembile sokuxilongwa, kubalulekile ukwenza i-ultrasound yesisu esiswini, lapho kuzokwehliswa khona i-tsepin enkulu.
Ukwelashwa kwe-tapeworm kubantu
Ukuze ukhiphe uchungechunge, udinga ukusetha inani lalo. Uma umbhobho we-tapeworm uphazamisa emzimbeni wengane noma unezilinganiso ezincane, bese ubeka ukwelashwa okunamandla. Kwezinye izimo, ukwelapha izidakamizwa kuthathelwa amakhemikhali abantu: ukudla imbewu yamathanga, ukukhishwa kwe-fern, njll. Izidakamizwa ze-antiparasitic zihlanganisa: i-niklosamide, i-praziquantel. Ngaphandle kokwelashwa kwe-etiological, ukuqokwa kwe-symptomatic therapy: izidakamizwa zokulwa nezifo ezithintekayo, izidakamizwa, ukusetshenziselwa ukuhlanza izidakamizwa. Uma umtshina wokugubha - imbongolo inkulu (amamitha amaningana) futhi ayikwazi ukuxiliswa, khona-ke ukungenelela okuhlinzekwa kuyadingeka ukuze ususe ama-parasite emzimbeni. Uma uthola uchungechunge emzimbeni, kufanele uhlale ubona udokotela ukuvimbela izinkinga ezinkulu.